Rastrabani.com | पदले ठूलो मान्छे हुने होइन, कर्मले हुने हो - Rastrabani.com पदले ठूलो मान्छे हुने होइन, कर्मले हुने हो - Rastrabani.com
पदले ठूलो मान्छे हुने होइन, कर्मले हुने हो
Rastrabani News January 21, 2021
दिपक गुरुङ, कास्की कांग्रेसका नेता
अन्नपूर्ण हिमालको दक्षिणस्थित कास्की भौगोलिक बनावटका दृष्टिले जति भिन्नता छ, त्यति नै राजनीतिक दृष्टिले विभिन्नता पाइन्छ । दक्षिणमा ४५० मिटरको उचाइदेखि उत्तरमा ७,९३९ (अन्नपूर्ण दोस्रो चुचुरो) मिटरसम्मका होचा–अग्ला भागहरू कास्कीमा छन् । त्यस्तै काँग्रेस, नेकपा, जनमोर्चा, साझा पार्टीदेखि जनमानसले नामै नसुनेका दलहरू पनि कास्कीमा क्रियाशील छन् । नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य दिपक गुरुङ गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम पोखरामा २०२६ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । पोखरा, जहाँ प्रकृतिले दिल खोलेर चित्ताकर्षक दृश्यहरू प्रदान गरेको छ । नेपाली, संस्कृत र अंग्रेजी भाषमा धारा प्रवाह भाषण गर्न सक्ने गुरुङसँग आज हामीले अहिलेको केन्द्रीय राजनीतिक र कास्की कांग्रेसकोे विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेका छौं :
० प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि एक खालको राजनीतिक तरंग आएको छ, राजनीतिक रूपमा यसलाई कसरी तपाई विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
– मुख्य कुरा त वैचारिक धार नै हो । कुन स्कुलिङबाट आएको छ, कुन दर्शन समातेर अगाडि बढेको छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गरेको हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले आदर्शको कुरा गर्छन्, व्यवहार त्यसअनुरूप गर्दैनन् । सिद्धान्त सबै राम्रै हुन्छन्, तर कस्तो व्यवहार गर्छ र कस्तो आचरणमा बस्छ त्यो नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैको आचरण नेपाली जनताले बुभ्mने अवसर पाए । सिद्धान्त र व्यवहारमा आएको भिन्नता तौलने मौका पाए । नेपाली कांग्रेसमा त्यो घीनलाग्दो अवस्था कहिल्यै आएन । नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित भएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भयो, तर नेताहरूविरुद्ध अशिष्ट ढंगले गालीगलौज भएन । काँग्रेसमा अनुभवको परिपक्वता देखियो ।
० सर्वोच्च अदालतको फैसला त कुर्नुपर्ला नि होइन र ?
– हो, नेपाली कांग्रेस सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने पार्टी हो । अदालतको आदेशको कांग्रेसले सधंै सम्मान गर्दै आएको छ । विभिन्न अधिवक्ताले हाल्नुभएको रिटमा पर्सि २२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको एमिकस क्युरीका लागि नाम पठाइसकेको छ । मलाई लाग्छ, एक डेढ महिनामा अदालतको निर्णय आउँछ, आउनु पनि पर्छ । हामीले धेरै कुर्नु पर्दैन । राजनीतिक रूपमा भन्ने हो चुनावकै पक्षमा फैसला आउने बुझिन्छ । निर्वाचन आयोगले आप्mनो काम सुरु गरिसक्यो ।
सँगसँगै के पनि हो भने हिजोको परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । पुस ५ गते करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले आपूmले पाएको जनमतको सम्मान गर्न सकेन । र, संसद् विघटनको सिफारिस ग¥यो । यो नेपालको राजनीतिमा देखिएको दुर्भाग्यपूर्ण अबस्था हो । त्यही दिन अर्थात् ५ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिन् । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन छ ।
० स्थानीय (कास्की) जनताको अभिमत कस्तो पाउनु भएको छ ?
– नेकपाका मतदाता निराश छन्, म कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता जे भन्नुस्, भएर भनेको होइन । पार्टी विभाजित भएपछि उनीहरू निराश छन्, कम्युनिस्ट पार्टीको दुई पक्षको विभाजनपछि भनाभन, भैmझगडा देखेर उनीहरूका समर्थकहरू, मतदाताहरु पनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई गाली गर्न थालेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले नेकपालाई मिलाउन खोजेको समाचार आएको थियो, उनीहरू निराश भएर रित्तो हात फर्कि सकेका छन् । एकीकरण गराउन सकेनन् ।
० नेकपा विभाजनको लाभ कांग्रेसले लिन खोजेको हो त ?
– होइन, मुलुक मध्यावधिमा जानुमा नेपाली कांग्रेसको कुनै भूमिका छैन । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ मत थियो । बीपी कोइरालापछिको शक्तिशाली सरकार हो यो । उनीहरूभित्रको झगडाले यो स्थिति आएको हो । मतका आधारमा भन्ने हो भने पहिले–पहिलेभन्दा कांग्रेसले बढी नै मत ल्याएको छ । एमाले र माओवादीले संयुक्त उम्मेदवार उठाएकाले मत कम देखिएको हो । एक्लाएक्लै तीन पार्टी उठेको भए नेपाली कांग्रेसले सम्मानित सिट संख्या ल्याउने अवस्था थियो । नेपाली जनताले एक पटक कम्युनिष्टहरु मिलेर आएका छन्, हेरौं न त भनेर सरकार बनाउने म्याण्डेट दिएका हुन् ।
० नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मामिला कम्युनिस्टको जस्तो छैन र, यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
– दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी समूहहरू हुन्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले लचकताकासाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । २००३ माघ १२ देखि १५ गतेसम्म कोलकातामा भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरेको हो । त्यस्तो कठिन घडीमा गठन भएको पार्टीलाई गाह्रो साँघुरो त प¥यो होला नि । बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह आफै लडाइँको मैदानमा नेतृत्व गर्नुभएको इतिहास छ । २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्mयुजन भएर नेपालमा गणतन्त्र आएको हो नि । यत्रो अनुभव भएको नेपालमा अर्को पार्टी छैन भन्ने मेरो दाबी छ । यी सबै क्रान्ति वा जनआन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । त्यसैले भावना मात्र भएर पनि हुँदैन, भावनामा व्यावहारिकता पनि मिसाउनुपर्छ ।
हामी बाह्रै महिना राजनीतिक फिल्डमा खटिने मान्छेलाई केको तयारी आवश्यक पर्छ र ? हामी त जहिल्यै गाउँगाउँँमै, घरघरमै हुन्छौं । दृष्टिकोणमा मेरो तयारी छ । म प्रतिनिधिसभाको सांसद भएँ भने यसो यसो गर्छु भन्ने स्पष्ट खाका तयार छ ।
० कास्कीमा कांग्रेस र नेकपालगायत दलहरूको अवस्था कस्तो छ ?
– जनतामा दलहरूप्रति विश्वास टुट्दै गएको हो कि झै देखिन्छ । मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा, जनमोर्चालगायतका राजनीति दलहरू क्रियाशील छन् । मुलुककाप्रति नेपाली कांग्रेस नै जिम्मेवार छ कि भन्न थालेका छन् जनताहरू । नेसनल मिडियाको पनि चुनावी माहोल बनाउन र चुनावमा प्रभाव पार्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसकारण बीपी कोइरालाले अखबारलाई राज्यको चौथो अंगको मान्यता दिनुभएको हो, आर्थिक स्रोतको जोहो गरिदिनु भएको हो नि । त्यसैले देशको पक्षमा विचार, विश्लेषण गर्नु पर्छ, लेख्नु पर्छ ।
० नेपाली कांग्रेसमा शुद्धीकरण हुने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?
– नेपाली कांग्रेसमा चेत पलाएको हुनुपर्छ । शुद्धीकरण क्रमशः हुने कुरा हो, एकैपटक हुने होइन । तर निषेधको राजनीति गरिनु हुन्न । पजेरोको विरोध गरेकै कारण विदुर पौडल जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वलाई पार्टीभित्र टिक्न दिइएन । पार्टीभित्र मौलाएको मुड्कीवादको विरोध गरेकै कारण प्रदीप गिरिको आवाजलाई निस्तेज पारिएको छ । सहमत वा असहमत सिद्धान्त, विचार र व्यवहारका आधारमा हुने हो । ज्ञानका आधारमा निर्णय लिन सक्नु प¥यो भन्ने मेरो मान्यता छ ।
० तपाई पार्टीको कुन कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
– महासमिति सदस्य छु । पार्टी सभापति कृष्ण केसीजीले उपसभापति बनाउँछु भन्नुभएको थियो । तर मेरो आफ्नै मान्यता छ, एक व्यक्ति एक पद । सर्वसाधारण जनताले मलाई माया गर्नुभएको छ । कार्यक्रमहरूमा बोलाउनु हुन्छ, त्यति माया भए पुगेको छ । दलहरूभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास कमजोर भयो भने बहुदलीय व्यवस्था अधिनायकवादमा परिणत हुन सक्छ । अहिले अधिनायकवाद हावी हुन लागेको अवस्था हो । पद महत्वपूर्ण होइन, पदमा बस्दा कस्तो इमेज बनायो त्यो महत्वपूर्ण हो ।
यी सबै क्रान्ति वा जनआन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । त्यसैले भावना मात्र भएर पनि हुँदैन, भावनामा व्यावहारिकता पनि मिसाउनुपर्छ ।
० प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने तयारी छैन ?
– एउटा आदर्शले राजनीतिमा लागियो, स्कुल, कलेजको उमेरदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा लागियो । मलाई कुनै त्यस्तो पद र पैसाको प्रलोभन छैन । तर अवसर आयो भने चुनाव नलड्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । हामी बाह्रै महिना राजनीतिक फिल्डमा खटिने मान्छेलाई केको तयारी आवश्यक पर्छ र ? हामी त जहिल्यै गाउँमै, घरघरमै हुन्छौं । दृष्टिकोणमा मेरो तयारी छ । म प्रतिनिधिसभाको सांसद भए भने यसो यसो गर्छु भन्ने स्पष्ट खाका तयार छ । अहिले नै सबै कुरा नखोलौं होला । दीर्घकालिक प्रभाव पार्ने काम गर्ने मेरो उद्देश्य छ । उदाहरणका लागि चीनको ग्रेटवाललाई हेरौं, वार्षिक एक करोडले ग्रेटवाल भिजिट गर्छन् । टिकट मात्र बेचेर करोडौं युआन पाउँछ चिनियाँ सरकारले । मैले सुनेको गलत होइन भने सिंगापुरले मन्त्री बनाउँदा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई आधार बनाउँछ । हरेक कुरालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
याे सामाग्री तरुण साप्ताहिकबाट